पुरुषोत्तम पौडेल - | Nagarik News - Nepal Republic Media
पुरुषोत्तम पौडेलका लेखहरु :
साना देशप्रति मोह मात्र कि विश्वव्यापी चिनारी ?
प्रधानमन्त्री ओलीको भियतनाम भ्रमणको अवसरमा नेपाल–भियतनाम सीधा हवाई सम्पर्क स्थापना गर्ने सम्झौता हुने बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन्।
पुरुषोत्तम पौडेल २७ वैशाख २०७६ शुक्रबार १० मिनेट पाठ
लोकतन्त्रमा कति स्वाधीन हामी ?
भारतले लगाएको नाकाबन्दीले भौगोलिक रुपमा पराधिन नभएको हाम्रो देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक रुपमा कति स्वाधीन छ भन्ने प्रश्नलाई अझ बलियो बनायो। यद्यपी हामी त्यो नाकाबन्दीबाट पाठ सिक्दै स्वाधीनताको यात्रामा बढेका छैनौँ।
पुरुषोत्तम पौडेल ११ वैशाख २०७६ बुधबार १९ मिनेट पाठ
चुनाव प्रचारमा कन्हैया : झुस्स दाह्री, त्यही निलो चप्पल, उही रातो सर्ट
बिहानको साँढे आठ बजे कन्हैयाकोे पाहुना घर (चुनावका आगन्तुकलाई बस्न बनाइएको घर) बाट मानिसहरु बाहिर निस्किन्छन्। उनी पनि त्यही घरमा सुत्दा रहेछन्। पक्की साढे दुई तलाको उक्त घरलाई केही समयदेखि कन्हैयाको चुनावी प्रचारका लागि प्रयोग गरिएको स्थानीयले बताए। केही मानिसको भीडलाई छिचोल्दै उनी भन्छाघरमा प्रवेश गर्छन्।
पुरुषोत्तम पौडेल ७ वैशाख २०७६ शनिबार १९ मिनेट पाठ
बेगुसरायमा कन्हैयाको घरमा जे देखियो
दिल्लीबाटै कन्हैयासँगको अन्तरवार्ता लिने निधो सहित म त्यहाँ पुगेकाले म उनको प्रतिक्षामा बस्छु। दिल्लीबाट हिँड्ने बेलामा मलाई भारतीय कांग्रेस पार्टीका एक वरिष्ठ नेतासँग अन्तर्वार्ता लिने समय पनि मिलेको थियो। तर म कन्हैयाको प्रख्याति सुनेर उनको घर पुगेको थिएँ।
पुरुषोत्तम पौडेल ५ वैशाख २०७६ बिहीबार १९ मिनेट पाठ
मोदीकालमा जेएनयूलाई कसरी बनाइँदैछ कमजोर?
सन् १९७५ मा भारतले सिक्किमलाई आफ्नो भूभागमा गाभेको विरोधमा जेएनयुका विद्यार्थी आन्दोलनमा थिए। त्यहीँबेला इन्दिरा गान्धी आफ्नो पिताको शालिकमा माल्यार्पण गर्न जाँदा विद्यार्थीले उनलाई प्रवेश गर्न दिएनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी विश्वविद्यालयको गेटबाटै फर्किइन्।
पुरुषोत्तम पौडेल १ वैशाख २०७६ आइतबार ३८ मिनेट पाठ
‘भारतमा बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना कम छ’
भारतमा बहुमतको सरकार बनने सम्भावना एकदमै कम छ। हामीले केही समयअघि भएको महत्त्वपूर्ण ठाउँका विधानसभाको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने पनि बहुमतको सरकारको सम्भावनालाई त्यसले सहज नभएको बताउँछ।
पुरुषोत्तम पौडेल २९ चैत्र २०७५ शुक्रबार २० मिनेट पाठ
चुनावको मुखमा के सोच्दैछन् भारतीय ?
आजदेखि भारतको १७ औं लोकसभाको निर्वाचन सुरु भएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा एकल पार्टीको सरकार बनाउने गरी बलियो बनेको भाजपाको पाँच वर्षे शासनको परीक्षण यही निर्वाचनले गर्दैछ। वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यकाल लम्बिने वा यही रोकिने भन्ने पनि यही निर्वाचनले निश्चित गर्नेछ।
पुरुषोत्तम पौडेल २८ चैत्र २०७५ बिहीबार १३ मिनेट पाठ
कता जाँदै छ नेकपा ?
यसको जिम्मा सचिवालय सदस्यलाई दिइए पनि पार्टीका दुई अध्यक्षको अनिच्छाले नै पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेको नेकपाका नेता कार्यकतामा बुझाइ छ।
पुरुषोत्तम पौडेल २२ चैत्र २०७५ शुक्रबार ६ मिनेट पाठ
किन कमजोर हुँदै छन् मोदी ?
इन्दिरा गान्धीको पालामा कंग्रेस बहुमत सरकार गठनपछि एकल सरकार गठन गर्ने भाजपा नै पहिलो दल हो। लामो समय गठबन्धन सरकार चलेको भारतमा गठबन्धन सरकारलाई प्रभावमा पारेजस्तै बहुमत सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई आफूअनुकूल चलाउन शक्ति राष्ट्रलाई सहज नभएको विश्वास गरिन्छ।
पुरुषोत्तम पौडेल २१ चैत्र २०७५ बिहीबार १४ मिनेट पाठ
त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘त्यहाँ त नेपालीले नेपाली नेतालाई सम्मान गरेको पाइनँ।’
पुरुषोत्तम पौडेल १८ चैत्र २०७५ सोमबार ८ मिनेट पाठ
लगानीसँगै श्रमिक पनि विदेशबाट !
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यतिवेला सरकार लागिपरेको छ। भोलि र पर्सि सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ। सम्मेलनको तयारी भइरहँदा सरकारले जापानसँग श्रम सम्झौतासमेत गरेको छ।
पुरुषोत्तम पौडेल १४ चैत्र २०७५ बिहीबार ५ मिनेट पाठ
कृषिमा वैदेशिक लगानी : स्वदेशी पुँजी बाहिरिने र व्यवसाय धरापमा पर्ने चिन्ता
गत फागुन १४ गते संसदमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरकण गर्न बनेको बिधेयक’ दर्ता भयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका प्रसाद यादव प्रस्तुतकर्ता रहेको उक्त विधेयकमाथि अहिले ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’मा छलफल भइरहेको छ।
पुरुषोत्तम पौडेल र किरण दहाल ५ चैत्र २०७५ मंगलबार ९ मिनेट पाठ
नाकाबन्दी लगाउने मोदीको शासन परीक्षण
पुस्तकको नाम ‘द प्यारोडक्सिकल प्राइममिनिस्टर नरेन्द्र मोदी एन्ड हिज इन्डिया’ राखिए पनि किताबको मूल कथ्य भने ‘अ फेलियर प्राइममिनिस्टर’हो।
पुरुषोत्तम पौडेल २ चैत्र २०७५ शनिबार १७ मिनेट पाठ
खाद्य सुरक्षासँग जेलिएको राष्ट्रिय सुरक्षा
खाद्यान्न संकट विश्वकै समस्या भएको छ। खाद्य अभाव भोगिरहेका अधिकांश देशका सरकार कमजोर छन्। त्यहाँ आन्दोलन र द्वन्द्वका घटना पनि अन्य देशको तुलनामा बढी हुने गरका छन्।
पुरुषोत्तम पौडेल २६ फाल्गुन २०७५ आइतबार ६ मिनेट पाठ
सीके राउतको राजनीतिक अवतरण : जस लिने होड
पृथकतावादी आभियान सञ्चालन गर्दै मधेसलाई स्वराज घोषणा गर्ने अभियानै थालेका डा. सीके राउत र सरकार पक्षबीच शुक्रबार ११ बुँदे राजनीतिक सहमति भएको छ। समहतिसँगै त्यसको जस लिन सरकार पक्षका मानिसबीच होडबाजी नै चलेको देखिन्छ।
पुरुषोत्तम पौडेल २५ फाल्गुन २०७५ शनिबार ६ मिनेट पाठ
पुरुषोत्तम पौडेलका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्